ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း သမိုင်းကြောင်း - Today News
ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း သမိုင်းကြောင်း
ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း တိဘက်တို ဘားမန်းလူမျိုးနွယ်စုကြီး မှ အကြီးဆုံးသောလူမျိုးဖြစ်သည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ နာဂ၊ သက်၊ ကမ်းယံ၊ပျူ တို့နောက်မှ ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းပျူတို့ထူထောင်သည့် ပထမပြည်ထောင်စုကို အေဒီ ၈ ရာစုတွင် နန်ကျောက်တို့က ဖျက်စီးပြီးချိန် မတိုင်မှီက ပင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်း၍ရနိုင်သည်။
အေဒီ ၁၀ ရာစုမတိုင်မှီ အချိန်ကပင် ကျောက်ဆည် ၁၁ ခရိုင်တွင် အခြေချခဲ့ပြီး နောက်များမကြာမှီ တွင်မြစ်သာ ၆ ခရိုင် ၊
ပုဂံ နေပြည်တော်တို့ကို ထူထောင်ကာဒုတိယမြန်မာပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့က ထိုပြည်ထောင်စုကိုသာပထမပြည်ထောင်စုအဖြစ် လက်ခံကြသည်။
အနော်ရထာ၏ ပထမပြည်ထောင်စု(ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး)၊ တပင်ရွှေထီး-ဘုရင့်နောင်တို့ ၏ ဒုတိယပြည်ထောင်စု (ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး)၊
အလောင်းဘုရား၏ တတိယပြည်ထောင်စု (တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး) တို့ကို တည်ထောင်ကာ သမိုင်း တစ်လျောက်တွင် အောင်နိုင်သူများအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
တတိယပြည်ထောင်စုခေတ်(ကုန်းဘောင်ခေတ်)ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ (အင်္ဂလိပ်တို့၏မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပထမကျူးကျော်စစ်ပွဲ) အပြီးတွင် မဏိပူရ ၊
တနင်္သာရီနှင့် ရခိုင် ဒေသ များကို အင်္ဂလိပ်တို့ထံ ပေးအပ်ခဲ့ရပြီး၁၈၈၆ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာအတွင်းသို့ကျရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် အဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။
နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ကူးပြောင်းကာ တစ်ပါတီဗဟိုဦးစီးစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၂၆ နှစ်အကြာတွင် တစ်ပါတီစနစ်ပျက်သုဉ်းပြီး တပ်မတော်မှ နိုင်ငံ့အာဏာကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန်စီမံလျက်ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂ ၊အာဆီယံ ၊ WTO စသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဗမာလူမျိုး တို့ဆင်းသက်လာပုံ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မလာမီ နှစ်ပေါင်း၎ဝဝဝကျော်ခန့်အချိန်က ဗမာလူမျိုး တို့သည်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဖက်ရှိ ကန်စုဒေသ၊ ထောင်မြစ်ဝှမ်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
သက်သေအထောက်အထားအားဖြင့် ဗမာတို့၏ ဘိုးဘွားများဖြစ်သည်ဟု ဆိုရန်ခက်သကဲ့သို့ ငြင်းပယ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိပေ။
တွေ့ရှိရသည့် ထိုလူမျိုးစုတို့၏ ကျန်ရစ်သောအသုံး အဆောင်များမှာ အတော်အတန် အဆင့်မြင့်သည့် ကျောက်ခေတ်နှောင်းလက်ရာမျိုးရှိပြီး
ခေတ်ပြိုင်တရုတ်လက်ရာများနှင့် ရေချိန် ညီသော ယဉ်ကျေးမှုမျိုးရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
တရုတ်တို့၏အင်အားကြီးမားစွာ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လာမှုများ၊ လူမျိုးစုအချင်းအချင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အဆိုပါ လူမျိုးစုသည် တောင်ဖက်ဒေသများသို့ ရွေ့ပြောင်းလာကြသည်။
ထိုသို့ လွတ်လပ်မှုအတွက် ရွေ့ပြောင်းရာတွင် ပေးဆပ်ရသော တန်ဖိုးမှာ အနှစ် ၃ဝဝဝနီးပါးမျှတိမ်ကောခဲ့ရသည်ယဉ်ကျေးမှုပင်ဖြစ်တော့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတို့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယဉ်ကျေးမှုကို ပစ်ပယ်ကာ ရောက်ရာအရပ်မှ ယဉ်ကျေးမှုများရောနှောလာသည်ကို လက်ခံခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တနည်းအား ဖြင့် ပုဂံတွင် အခြေချ သည့် အေဒီ ၁၁ရာစုက ဗမာတို့ယဉ်ကျေးမှုသည် အေဒီ ၁၁ရာစု တရုတ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ယဉ်လျှင် အဆင့်အတန်းချင်းများစွာ ကွာခြားခဲ့ပေပြီ။
သို့ဖြင့် ခရစ်ရ ရာစုများအရောက်တွင် ထိုလူမျိုးစုသည် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး တရုတ်မှတ်တမ်းများတွင် မန်းမန် ဟုခေါ်သည့် လူမျိုးအုပ်စုကြီး အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။
ထိုအုပ်စုကြီးအတွင်းမှ မန်ဟုခေါ်သည့် လူမျိုးစုမှ မိမိတို့အကြီးအကဲဖြစ်သူကို မင်း၊မင်းစော ဟုခေါ်ကြပြီး စစ်မက်ရေးရာကျွမ်းကျင် သူများဖြစ်လာသည်။
သို့သော် မွှေးမြူရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ထိုစဉ်ကပင် အိမ်ကြက်ကို မွှေးမြူနေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရှိ ရသည်။
ထိုလူမျိုးသည် ထကြွလုံ့လရှိပြီး စစ်ရေးတွင်အလွန် အားသန်သူများဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
စစ်ပွဲများတွင် လှံနှင့် မြင်းစီးကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချကာ တိုက်ခိုက်သည်။ အမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများပါ မြင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ စီးနှင်းနိုင်သည်။
လေးမြားအတတ်တွင် ကျင်လည်ကာ အဆိပ်လူးမြားဖြင့်လည်းရန်သူကိုတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။ ခြေတံရှည်အိမ်များတည်ဆောက်နေထိုင်သည်။
ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီးခေါင်းပေါင်းအနီကို ပေါင်းလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။ ၈ရာစုအစောပိုင်းကာလများတွင် နန်ကျောက်တို့၏ အုပ်စီးမှုကိုခံလာရပြီး ခရစ်နှစ် ၇၉၄ ခန့်တွင် နန်ကျောက်လက်အောက်ခံဖြစ်ရသည်။
မန်းမန်စစ်သည်များသည် အလွန်တရာ သတ္တိရှိပြီး သစ္စာလည်းမြဲသည်ဟုဆိုလေ့ရှိသည်။
စစ်ပွဲတွင် မန်းမန်စစ်သည်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ၍ မည်သို့ပင်ရိုက် နှက်စစ်ဆေးစေကာမူမည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမှ ပြော ပြမည်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။
စစ်တိုက်သန်သူများဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ကို အုပ်စီး ထားသည့် နန်ကျောက်များခိုင်းသကဲ့သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှည့်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်တစ်ကြောင်း၊
နဂိုကပင်လွတ်လပ်မှုကိုအလေးထားသည့်လူမျိုးဖြစ်သည်ကြောင့် တစ်ကြောင်း ခရစ်နှစ် ၉ ရာစုမတိုင်မီကပင် နန်ကျောက်အုပ်ချုပ်သည့် ပြည်နယ်အတွင်းမှ အုပ်စုလိုက်စတင်ထွက်ခွာလာကြသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတခွင်နေရာ ဒေသ အတော်များများကို ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့် ဒေသကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သို့ဖြင့် ပူပြင်း စိုစွတ်ပြီး ငှက်ဖျားရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါဆိုးမျိုးရှိရာ ဒေသများကို ရှောင် ရှားကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဗဟိုဒေသ၊
ပူအိုက်ခြောက်သွေ့ကာ ရောဂါဘယဘေးကင်းရှင်းသည့် ဒေသကို ရွေးချယ်အခြေ ချလေတော့သည်။
မြန်မာ့မြေပထဝီအနေအထားကို သိရှိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိတို့အားခုခံသူမရှိမည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်သံလွင် မြစ်ကိုစုန်ဆင်းကာ
မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်း ကာ ဗဟိုမြန်မာဒေသကို အရှေ့တောင်ထောင့်မှ ဝင်ရောက် သည်။
ထို့နောက်စိုက်ပျိုးမြေကောင်း မွန်သည့်ကျောက်ဆည် နှင့် မင်းဘူးဒေသများကို အရင်ရောက်နှင့်သော မွန်၊သက် ၊ပလောင် နှင့် ပျူတို့ထံမှ လုယူသည်။
(လုယူသည်ဟု ဆိုရာတွင် တစ်ပြိုင်နက် စစ်ပြု၍ ယူသည်မျိုးရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ လူဦး ရေအတိုးအပွားပေါ်တွင် အခြေပြုကာဝါးမြိုခြင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။)
ထို့နောက် ဆက်သွယ်ရေး၊ရိက္ခာရရှိနိုင်မှုနှင့်အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ကာ မြို့တော်အဖြစ်အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည့် ပုဂံကိုထူထောင်သည်။
ထိုနောက်မိမိအရင်လူမျိုးများဖြစ်သည့် ပျူ နင့် မွန်တို့ထံမှ ဘာသာစကား၊ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို လက်ခံသုံးစွဲ လာကြသည်။
ထို့ကြောင့် အောင်နိုင်သူများသည် ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် ကျဆုံးပြီဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
ပလောင်နှင့် မွန်လူမျိုးများထံမှ ဆည်ရေသောက်လယ် ယာမြေစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ရယူကာစိုက်ပျိုးရေးကိုအကြီး အကျယ်တိုးချဲ့သည်။
တောများကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကာ စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် ဖေါ်ထုတ်သည်။သို့ဖြင့် ရွှေဘို၊မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊စစ်ကိုင်း နှင့် မန္တလးအစရှိသည့် ဒေသများတွင် လယ်စိုက်ပျိုးကြပြီး အခြား
မြေဩဇာညံ့ဖျင်းသည့်အရပ် များတွင် ကွမ်း၊ထန်း အစရှိသည့်ဥယျာဉ်ခြံများကိုလုပ်ကိုင် ကြသည်။
အလွန်မှ ညံ့ဖျင်းသည့် မြေများတွင် ပြောင်း၊နှမ်း အစရှိသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးသည်။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးအားစိုက်ပျိုးမြေ အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာဗမာတို့အတွက်အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်သည့် ကြီးမားသော
စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းကာ အခြေတကျနေထိုင်ခွင့်ရရှိလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် လူဦးရေမှာလည်း အလျင်အမြန်ပင်တိုးပွားလာပြီး နယ်ပယ်မှာလည်း ကျယ်ပြန့်လာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းလွင်ပြင်ဒေသ များတွင် အစဉ်အဆက် နေထိုင်ကြသည်။
AD ၁၀ ရာစု ခန့်စ၍ ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် မြို့ပြများ ထူထောင်နေထိုင်ကြသည်။ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ အမရပူရ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးတို့မှာ ထင်ရှားသည်။
ယနေ့အချိန်များတွင် ဗမာလူမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံစုစုပေါင်းလူဦးရေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။
ဗမာအမျိုးသမီး များသည် ရင်စေ့ ရှပ်အကျီ်ကို ဝတ် ဆင်ပြီး ပိုးချည်ဖောက်ထားသော ကွင်းလုံချည်ကို ဝတ်ဆင်၍ပခုံးတွင်ပုဝါလွှား ရင်တစ်ဘက်တစ်ချက် တွင်ချထားသည်။
ဗမာအမျိုးသမီးများသည်ဆံပင် ကိုအထူးဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့လေ့ရှိသည်။ အမျိုးသားများ မှာ ဦးခေါင်းတွင် ခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ တိုက်ပုံ ရင်စေ့ နှင့် ပုဆိုးကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဘာသာအယူဝါဒအားဖြင့်အစပထမတွင်မဟာယာနဂိုဏ်း၊ ရိုးရာနတ်နှင့်ဟိန္ဒူနတ်တို့ကို ကိုးကွယ်သည်ဟု လေ့လာသိရှိရပါသည်။
အနော်ရထာမင်း လက်ထက်တွင်ထိုအယူကွဲဂိုဏ်းများကို နှိပ်ကွပ်ပြီး စစ်မှန်သည့် ထေရဝါဒ(မဟာယာနဂိုဏ်း က ဟိနယာနဟုခေါ်သည်။) ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ရန် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော်သမိုင်းတစ်လျောက်တွင်မဟာယာန နွယ်သော ပွဲကျောင်းအလေ့အထများ၊ရိုးရာနတ်နှင့်ဟိန္ဒူဆိုင်ရာ အလေ့အထများကိုညောင်ရမ်းခေတ်အထိ တွေ့ရှိခဲ့ ရသည်။
သက်သေအားဖြင့် ကျန်စစ်သားမင်း နန်းသစ် တည်ပြီး နန်းသိမ်းပွဲခံရာတွင် ဟိန္ဒူနတ်ဖြစ်သည့် ဗိဿနိုး နတ်များကိုပသခြင်း တောင်ငူနန်းဆက်တွင်လည်းတောင်တွင်းရှင်မုန်ယိုဆရာတော်၊
ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၏ နောက်ဆုံး မင်းဆက်များတွင် ဗားမဲ့၊ ဗားမော့ အစရှိသည့် မွန်ဆရာတော်များကို ပင့်ဖိတ်ကာ နတ်မေးစေခြင်းအစရှိ သည်တို့ကိုတွေ့ရသည်။
ယနေ့ မြန်မာစာပေအရေးအသားမှာ ဗမာစာကိုစံထားပြီး ရုံးသုံးစာအဖြစ်၊ မြန်မာစာအဖြစ် သတ်မှတ်သည် ဟုဆိုနိုင်သည်။
စာပေအရေးအသား တွင် ဗမာတို့သည် အနွယ်တူသော ပျူတို့ထံမှ မသင်ယူခဲ့ပဲ ၊မွန်တို့ကို ဆရာတင်ခဲ့ပြီး အက္ခရာ အရေးအသားမှာလည်း မွန်တို့ထံမှရယူသည်။
ထို့ကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ပျူကျောက်စအကြွင်းအကျန် များကို ဖတ်ရှုအဓိပ္ပာယ် ဖော်နိုင်ရန်ခက်ခဲနေရသည်။
ဗမာတို့သည် ခရစ်နှစ် ၁၁၁၃ မှ ၁၁၇၄ အတွင်း၌ မွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုမှီငြမ်းပြု၍ သီးခြား ယဉ်ကျေးမှု တည်ထောင်ရန်
အားထုတ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ခေတ် ဟောင်းမြန်မာ့ရာဇဝင်စာ-၂၅၌ တွေ့ရသည်။
ဗမာ့သမိုင်းဆရာတို့ကမူ ဗမာစာသည် ပျူစာမှဆင်းသက်လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။
ပျူစာမှ ဆင်းသက်ရိုးမှန်လျှင်ပျူ စာမှသည် ဗမာစာဖြစ်လာ စေရန် ခေတ်အဆက်ဆက် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့သော ကြားခံစာပေမျိုး ရှိရမည်။
ယင်းကဲ့သို့မရှိခဲ့ကြောင်းကို ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာကသက်သေ ခံလျှက်ရှိသည်။ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ၌ ပါဠိ၊ ဗမာ၊ ပျူ၊ မွန် ဟူ၍ စာပေလေးမျိုးဖြင့် တပြိုင်တည်း ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ယင်းကျောက်စာမှာအကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းကို စာပေလေးမျိုးဖြင့် တစ်ခေတ်တည်းတွင် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ဗမာစာသည် ပျူ စာမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟူသော အဆိုမှာ ခိုင်လုံသောအထောက် အထားမဟုတ်ချေ။
အလားတူစွာ မွန်စာမှဆင်းသက်လာ သည်ဟု ဆိုပြန်ရန်လည်း ယင်းကျောက်စာမှာပင် မွန်စာလည်း ပါရှိနေပြီးဖြစ်သောကြောင်းတည်း။
ယနေ့ထိ ပျူကျောက်စာ ကိုကောင်းစွာ ရေရေလည်လည်ဖတ်တတ်သူ ဟူ၍မရှိသေးချေ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းက သူ၏ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ့ရာဇဝင် စာ-၁၂၂ တွင် ထိုလေးရာစုတွင် စာရေးနည်းပညာကို ပျူတို့ ရကြလျှက် မွန်နှင့် ရခိုင်တို့က ၆ ရာစုတွင်ရနေပြီးဖြစ်လျှက် နောင်အခါ
ဗမာတို့က ပျူ၊ မွန် နှစ်ဦးစလုံး ထံမှ နည်းကို မှီလျှက် ၁၁ ရာစုတွင် ထိုပညာကို ရကြသည်ဟု မှတ်ယူနိုင် သည်ဟူ၍ ကောက်ချက်ချ ရေးသားခဲ့ပါသည်။
တဖန်ပုဂံခေတ်၊ပင်းယခေတ်၊အင်းဝခေတ် ကျောက်စာများကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပါကရခိုင်သံဖြင့်ရေးသားထား သောရခိုင် စာပေအသုံးအနူန်းများကိုသာ တွေ့ရှိကြရပြန်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗမာတို့သည် ဗမာစာကို ပျူနှင့် မွန်တို့ထံမှ ရသည်ဟူသောအဆိုကို စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာသည် . ။
ရခိုင့်အသံ နှင့် ပုဂံခေတ်ဗမာကျောက်စာ ကို နှိင်းယှဉ်ခြင်း
ဗမာစာပေ တိုးတက်လာသော ပထမအင်းဝခေတ် ကာလ မှာလည်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ကို ရှမ်းတို့ကြီးစိုးထားချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဗမာစာ တိုးတက်လာ ခြင်းသည် ရှမ်းတို့ရဲ့ ကျေးဇူး လည်း ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗမာစာ သည် ဗမာလူမျိူးတို့ရဲ့ စာပေ ဟု ဆိုခြင်းထက် မြန်မာပြည်ထောင်စုသားအားလုံးတို့ရဲ့အများပိုင် ဘုံ စာပေ အရေး အသား ဟု ဆိုရပေမည်။
ဗမာလူမြိုး ပျေါပေါကျလာရခွငျး သမိုငျးကွောငျး
ဗမာလူမြိုး ပျေါပေါကျလာပုံ သမိုငျးကွောငျး တိဘကျတို ဘားမနျးလူမြိုးနှယျစုကွီး မှ အကွီးဆုံးသောလူမြိုးဖွဈသညျ။
ယနေ့ မွနျမာနိုငျငံ နယျနိမိတျအတှငျးသို့ နာဂ၊ သကျ၊ ကမျးယံ၊ပြူ တို့နောကျမှ ဝငျရောကျလာခွငျးဖွဈသျောလညျးပြူတို့ထူထောငျသညျ့ ပထမပွညျထောငျစုကို အဒေီ ၈ ရာစုတှငျ နနျကြောကျတို့က ဖကျြစီးပွီးခြိနျ မတိုငျမှီက ပငျ ရောကျရှိနထေိုငျနခေဲ့ပွီးဖွဈသညျဟုခနျ့မှနျး၍ရနိုငျသညျ။
အဒေီ ၁၀ ရာစုမတိုငျမှီ အခြိနျကပငျ ကြောကျဆညျ ၁၁ ခရိုငျတှငျ အခွခေခြဲ့ပွီး နောကျမြားမကွာမှီ တှငျမွဈသာ ၆ ခရိုငျ ၊
ပုဂံ နပွေညျတျောတို့ကို ထူထောငျကာဒုတိယမွနျမာပွညျထောငျစုကို တညျထောငျခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော မွနျမာနိုငျငံသားတို့က ထိုပွညျထောငျစုကိုသာပထမပွညျထောငျစုအဖွဈ လကျခံကွသညျ။
အနျောရထာ၏ ပထမပွညျထောငျစု(ပထမမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး)၊ တပငျရှထေီး-ဘုရငျ့နောငျတို့ ၏ ဒုတိယပွညျထောငျစု (ဒုတိယ မွနျမာနိုငျငံတျောကွီး)၊
အလောငျးဘုရား၏ တတိယပွညျထောငျစု (တတိယမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး) တို့ကို တညျထောငျကာ သမိုငျး တဈလြောကျတှငျ အောငျနိုငျသူမြားအဖွဈရပျတညျနိုငျခဲ့သညျ။
တတိယပွညျထောငျစုခတျေ(ကုနျးဘောငျခတျေ)ပထမ အင်ျဂလိပျ မွနျမာ စဈပှဲ (အင်ျဂလိပျတို့၏မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ပထမကြူးကြျောစဈပှဲ) အပွီးတှငျ မဏိပူရ ၊
တနင်ျသာရီနှငျ့ ရခိုငျ ဒသေ မြားကို အင်ျဂလိပျတို့ထံ ပေးအပျခဲ့ရပွီး၁၈၈၆ တှငျ မွနျမာနိုငျငံသညျ ဗွိတိသြှ အငျပါယာအတှငျးသို့ကရြောကျခဲ့သညျ။
၁၉၃၇ ခုနှဈအထိ မွနျမာနိုငျငံသညျ အိန်ဒိယ၏ ပွညျနယျတဈခုအဖွဈ တညျရှိခဲ့ပွီးနောကျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး၏ ဦးဆောငျကွိုးပမျးမှုကွောငျ့ ၁၉၄၈ ခုနှဈ
ဇနျနဝါရီလ (၄) ရကျနတှေ့ငျဗွိတိသြှ အုပျခြုပျမှု အောကျမှ လှတျလပျရေး ရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျ အဖွဈပွနျလညျထူထောငျခဲ့သညျ။
နောကျ ၁၉၆၂ ခုနှဈတှငျ ပွညျထောငျစုဆိုရှယျလဈသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော အဖွဈ ကူးပွောငျးကာ တဈပါတီဗဟိုဦးစီးစနဈဖွငျ့ အုပျခြုပျခဲ့သညျ။
၂၆ နှဈအကွာတှငျ တဈပါတီစနဈပကျြသုဉျးပွီး တပျမတျောမှ နိုငျငံ့အာဏာကို ထိနျးသိမျးခဲ့သညျ။
၂၀၁ဝ ခုနှဈတှငျ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစနဈသို့ ကူးပွောငျးရနျစီမံလကျြရှိပွီး ကုလသမဂ်ဂ ၊အာဆီယံ ၊ WTO စသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ။
ဗမာလူမြိုး တို့ဆငျးသကျလာပုံ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ဝငျရောကျမလာမီ နှဈပေါငျး၎ဝဝဝကြျောခနျ့အခြိနျက ဗမာလူမြိုး တို့သညျ
တရုတျနိုငျငံ အနောကျမွောကျဖကျရှိ ကနျစုဒသေ၊ ထောငျမွဈဝှမျးတှငျ နထေိုငျခဲ့ကွသညျဟု ခနျ့မှနျးရသညျ။
သကျသအေထောကျအထားအားဖွငျ့ ဗမာတို့၏ ဘိုးဘှားမြားဖွဈသညျဟု ဆိုရနျခကျသကဲ့သို့ ငွငျးပယျနိုငျခွငျးလညျးမရှိပေ။
တှရှေိ့ရသညျ့ ထိုလူမြိုးစုတို့၏ ကနျြရဈသောအသုံး အဆောငျမြားမှာ အတျောအတနျ အဆငျ့မွငျ့သညျ့ ကြောကျခတျေနှောငျးလကျရာမြိုးရှိပွီး
ခတျေပွိုငျတရုတျလကျရာမြားနှငျ့ ရခြေိနျ ညီသော ယဉျကြေးမှုမြိုးရှိသညျဟု ဆိုနိုငျသညျ။
တရုတျတို့၏အငျအားကွီးမားစှာ နယျပယျခြဲ့ထှငျလာမှုမြား၊ လူမြိုးစုအခငျြးအခငျြး တိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့အဆိုပါ လူမြိုးစုသညျ တောငျဖကျဒသေမြားသို့ ရှပွေ့ောငျးလာကွသညျ။
ထိုသို့ လှတျလပျမှုအတှကျ ရှပွေ့ောငျးရာတှငျ ပေးဆပျရသော တနျဖိုးမှာ အနှဈ ၃ဝဝဝနီးပါးမြှတိမျကောခဲ့ရသညျယဉျကြေးမှုပငျဖွဈတော့သညျ။
ဆိုလိုသညျမှာ မိမိတို့လူမြိုးစုလှတျမွောကျရေးအတှကျ ယဉျကြေးမှုကို ပဈပယျကာ ရောကျရာအရပျမှ ယဉျကြေးမှုမြားရောနှောလာသညျကို လကျခံခဲ့ရခွငျးပငျဖွဈသညျ။
တနညျးအား ဖွငျ့ ပုဂံတှငျ အခွခြေ သညျ့ အဒေီ ၁၁ရာစုက ဗမာတို့ယဉျကြေးမှုသညျ အဒေီ ၁၁ရာစု တရုတျတို့၏ ယဉျကြေးမှု နှငျ့ ယဉျလြှငျ အဆငျ့အတနျးခငျြးမြားစှာ ကှာခွားခဲ့ပပွေီ။
သို့ဖွငျ့ ခရဈရ ရာစုမြားအရောကျတှငျ ထိုလူမြိုးစုသညျ တရုတျ-မွနျမာနယျစပျသို့ရောကျလာပွီဖွဈပွီး တရုတျမှတျတမျးမြားတှငျ မနျးမနျ ဟုချေါသညျ့ လူမြိုးအုပျစုကွီး အဖွဈ တညျရှိခဲ့သညျ။
ထိုအုပျစုကွီးအတှငျးမှ မနျဟုချေါသညျ့ လူမြိုးစုမှ မိမိတို့အကွီးအကဲဖွဈသူကို မငျး၊မငျးစော ဟုချေါကွပွီး စဈမကျရေးရာကြှမျးကငျြ သူမြားဖွဈလာသညျ။
သို့သျော မှေးမွူရေးနှငျ့စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးမြားကိုလညျး ဆောငျရှကျကွကွောငျးသိရှိရသညျ။ထိုစဉျကပငျ အိမျကွကျကို မှေးမွူနပွေီဖွဈသညျဟု သိရှိ ရသညျ။
ထိုလူမြိုးသညျ ထကွှလုံ့လရှိပွီး စဈရေးတှငျအလှနျ အားသနျသူမြားဖွဈသညျ ဟုဆိုသညျ။
စဈပှဲမြားတှငျ လှံနှငျ့ မွငျးစီးကြှမျးကငျြမှုကို အသုံးခကြာ တိုကျခိုကျသညျ။ အမြိုးသားမြားသာမကအမြိုးသမီးမြားပါ မွငျးကို ကြှမျးကငျြစှာ စီးနှငျးနိုငျသညျ။
လေးမွားအတတျတှငျ ကငျြလညျကာ အဆိပျလူးမွားဖွငျ့လညျးရနျသူကိုတိုကျခိုကျလရှေိ့သညျ။ ခွတေံရှညျအိမျမြားတညျဆောကျနထေိုငျသညျ။
ဘောငျးဘီဝတျဆငျလရှေိ့ပွီးခေါငျးပေါငျးအနီကို ပေါငျးလရှေိ့ကွောငျး သိရသညျ။ ၈ရာစုအစောပိုငျးကာလမြားတှငျ နနျကြောကျတို့၏ အုပျစီးမှုကိုခံလာရပွီး ခရဈနှဈ ၇၉၄ ခနျ့တှငျ နနျကြောကျလကျအောကျခံဖွဈရသညျ။
မနျးမနျစဈသညျမြားသညျ အလှနျတရာ သတ်တိရှိပွီး သစ်စာလညျးမွဲသညျဟုဆိုလရှေိ့သညျ။
စဈပှဲတှငျ မနျးမနျစဈသညျတဈဦးအား ဖမျးဆီးရမိ၍ မညျသို့ပငျရိုကျ နှကျစဈဆေးစကောမူမညျသညျ့လြှို့ဝှကျခကျြကိုမှ ပွော ပွမညျမဟုတျဟု ဆိုသညျ။
စဈတိုကျသနျသူမြားဖွဈသျောလညျး မိမိတို့ကို အုပျစီး ထားသညျ့ နနျကြောကျမြားခိုငျးသကဲ့သို့ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ လှညျ့လညျတိုကျခိုကျခွငျးမှာ မဖွဈနိုငျသညျကွောငျ့တဈကွောငျး၊
နဂိုကပငျလှတျလပျမှုကိုအလေးထားသညျ့လူမြိုးဖွဈသညျကွောငျ့ တဈကွောငျး ခရဈနှဈ ၉ ရာစုမတိုငျမီကပငျ နနျကြောကျအုပျခြုပျသညျ့ ပွညျနယျအတှငျးမှ အုပျစုလိုကျစတငျထှကျခှာလာကွသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှတခှငျနရော ဒသေ အတျောမြားမြားကို ရောကျဖူးပွီးဖွဈသဖွငျ့ မိမိတို့နှငျ့ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈမညျ့ ဒသေကို ရှေးခယျြနိုငျပွီဖွဈသညျ။
သို့ဖွငျ့ ပူပွငျး စိုစှတျပွီး ငှကျဖြားရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါဆိုးမြိုးရှိရာ ဒသေမြားကို ရှောငျ ရှားကာ မွနျမာနိုငျငံ၏ဗဟိုဒသေ၊
ပူအိုကျခွောကျသှကေ့ာ ရောဂါဘယဘေးကငျးရှငျးသညျ့ ဒသေကို ရှေးခယျြအခွေ ခလြတေော့သညျ။
မွနျမာ့မွပေထဝီအနအေထားကို သိရှိပွီးဖွဈသကဲ့သို့ မိမိတို့အားခုခံသူမရှိမညျ့လမျးကွောငျးဖွဈသညျ့သံလှငျ မွဈကိုစုနျဆငျးကာ
မွောကျပိုငျးရှမျးပွညျနယျကိုဖွတျသနျး ကာ ဗဟိုမွနျမာဒသေကို အရှတေ့ောငျထောငျ့မှ ဝငျရောကျ သညျ။
ထို့နောကျစိုကျပြိုးမွကေောငျး မှနျသညျ့ကြောကျဆညျ နှငျ့ မငျးဘူးဒသေမြားကို အရငျရောကျနှငျ့သော မှနျ၊သကျ ၊ပလောငျ နှငျ့ ပြူတို့ထံမှ လုယူသညျ။
(လုယူသညျဟု ဆိုရာတှငျ တဈပွိုငျနကျ စဈပွု၍ ယူသညျမြိုးရှိနိုငျသကဲ့သို့၊ လူဦး ရအေတိုးအပှားပျေါတှငျ အခွပွေုကာဝါးမွိုခွငျးလညျး ရှိနိုငျပါသညျ။)
ထို့နောကျ ဆကျသှယျရေး၊ရိက်ခာရရှိနိုငျမှုနှငျ့အခွအေနေ အရပျရပျကို သုံးသပျကာ မွို့တျောအဖွဈအလယျဗဟိုတှငျရှိသညျ့ ပုဂံကိုထူထောငျသညျ။
ထိုနောကျမိမိအရငျလူမြိုးမြားဖွဈသညျ့ ပြူ နငျ့ မှနျတို့ထံမှ ဘာသာစကား၊ဘာသာရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုမြားကို လကျခံသုံးစှဲ လာကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အောငျနိုငျသူမြားသညျ ယဉျကြေးမှုဖွငျ့ ကဆြုံးပွီဟု ဆိုရလောကျအောငျပငျဖွဈတော့သညျ။
ပလောငျနှငျ့ မှနျလူမြိုးမြားထံမှ ဆညျရသေောကျလယျ ယာမွစေိုကျပြိုးနညျးစနဈကို ရယူကာစိုကျပြိုးရေးကိုအကွီး အကယျြတိုးခြဲ့သညျ။
တောမြားကိုခုတျထှငျရှငျးလငျးကာ စိုကျပြိုးမွအေဖွဈ ဖျေါထုတျသညျ။သို့ဖွငျ့ ရှဘေို၊မုံရှာ၊ ပခုက်ကူ၊စဈကိုငျး နှငျ့ မန်တလးအစရှိသညျ့ ဒသေမြားတှငျ လယျစိုကျပြိုးကွပွီး အခွား
မွဩေဇာညံ့ဖငျြးသညျ့အရပျ မြားတှငျ ကှမျး၊ထနျး အစရှိသညျ့ဥယြာဉျခွံမြားကိုလုပျကိုငျ ကွသညျ။
အလှနျမှ ညံ့ဖငျြးသညျ့ မွမြေားတှငျ ပွောငျး၊နှမျး အစရှိသညျတို့ကို စိုကျပြိုးသညျ။
ဤသို့ဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အလယျပိုငျး ခွောကျသှဒေ့သေကွီးတဈခုလုံးအားစိုကျပြိုးမွေ အဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ခွငျးမှာဗမာတို့အတှကျအလှနျပငျ ဂုဏျယူဖှယျဖွဈသညျ့ ကွီးမားသော
စိုကျပြိုးရေးဖွဈထှနျးကာ အခွတေကနြထေိုငျခှငျ့ရရှိလာပွီ ဖွဈသဖွငျ့ လူဦးရမှောလညျး အလငျြအမွနျပငျတိုးပှားလာပွီး နယျပယျမှာလညျး ကယျြပွနျ့လာသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ အထကျပိုငျးနှငျ့ အလယျပိုငျးလှငျပွငျဒသေ မြားတှငျ အစဉျအဆကျ နထေိုငျကွသညျ။
AD ၁၀ ရာစု ခနျ့စ၍ ဧရာဝတီ မွဈရိုးတဈလြှောကျတှငျ မွို့ပွမြား ထူထောငျနထေိုငျကွသညျ။ပုဂံ၊ အငျးဝ၊ အမရပူရ၊ စဈကိုငျး၊ မန်တလေးတို့မှာ ထငျရှားသညျ။
ယနအေ့ခြိနျမြားတှငျ ဗမာလူမြိုးမှာ မွနျမာနိုငျငံစုစုပေါငျးလူဦးရေ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျောရှိသညျ။
ဗမာအမြိုးသမီး မြားသညျ ရငျစေ့ ရှပျအကျြီကို ဝတျ ဆငျပွီး ပိုးခညျြဖောကျထားသော ကှငျးလုံခညျြကို ဝတျဆငျ၍ပခုံးတှငျပုဝါလှား ရငျတဈဘကျတဈခကျြ တှငျခထြားသညျ။
ဗမာအမြိုးသမီးမြားသညျဆံပငျ ကိုအထူးဆငျယငျထုံးဖှဲ့လရှေိ့သညျ။ အမြိုးသားမြား မှာ ဦးခေါငျးတှငျ ခေါငျးပေါငျးပေါငျး၍ တိုကျပုံ ရငျစေ့ နှငျ့ ပုဆိုးကို ဝတျဆငျကွသညျ။
ဘာသာအယူဝါဒအားဖွငျ့အစပထမတှငျမဟာယာနဂိုဏျး၊ ရိုးရာနတျနှငျ့ဟိန်ဒူနတျတို့ကို ကိုးကှယျသညျဟု လလေ့ာသိရှိရပါသညျ။
အနျောရထာမငျး လကျထကျတှငျထိုအယူကှဲဂိုဏျးမြားကို နှိပျကှပျပွီး စဈမှနျသညျ့ ထရေဝါဒ(မဟာယာနဂိုဏျး က ဟိနယာနဟုချေါသညျ။) ဗုဒ်ဓဘာသာကို ကိုးကှယျရနျ ပြိုးထောငျပေးခဲ့သညျ။
သို့သျောသမိုငျးတဈလြောကျတှငျမဟာယာန နှယျသော ပှဲကြောငျးအလအေ့ထမြား၊ရိုးရာနတျနှငျ့ဟိန်ဒူဆိုငျရာ အလအေ့ထမြားကိုညောငျရမျးခတျေအထိ တှရှေိ့ခဲ့ ရသညျ။
သကျသအေားဖွငျ့ ကနျြစဈသားမငျး နနျးသဈ တညျပွီး နနျးသိမျးပှဲခံရာတှငျ ဟိန်ဒူနတျဖွဈသညျ့ ဗိဿနိုး နတျမြားကိုပသခွငျး တောငျငူနနျးဆကျတှငျလညျးတောငျတှငျးရှငျမုနျယိုဆရာတျော၊
ညောငျရမျးမငျးဆကျ၏ နောကျဆုံး မငျးဆကျမြားတှငျ ဗားမဲ့၊ ဗားမော့ အစရှိသညျ့ မှနျဆရာတျောမြားကို ပငျ့ဖိတျကာ နတျမေးစခွေငျးအစရှိ သညျတို့ကိုတှရေ့သညျ။
ယနေ့ မွနျမာစာပအေရေးအသားမှာ ဗမာစာကိုစံထားပွီး ရုံးသုံးစာအဖွဈ၊ မွနျမာစာအဖွဈ သတျမှတျသညျ ဟုဆိုနိုငျသညျ။
စာပအေရေးအသား တှငျ ဗမာတို့သညျ အနှယျတူသော ပြူတို့ထံမှ မသငျယူခဲ့ပဲ ၊မှနျတို့ကို ဆရာတငျခဲ့ပွီး အက်ခရာ အရေးအသားမှာလညျး မှနျတို့ထံမှရယူသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မကျြမှောကျခတျေတှငျ ပြူကြောကျစအကွှငျးအကနျြ မြားကို ဖတျရှုအဓိပ်ပာယျ ဖျောနိုငျရနျခကျခဲနရေသညျ။
ဗမာတို့သညျ ခရဈနှဈ ၁၁၁၃ မှ ၁၁၇၄ အတှငျး၌ မှနျယဉျကြေးမှုကိုမှီငွမျးပွု၍ သီးခွား ယဉျကြေးမှု တညျထောငျရနျ
အားထုတျနဆေဲ ဖွဈကွောငျး ဒေါကျတာသနျးထှနျး၏ခတျေ ဟောငျးမွနျမာ့ရာဇဝငျစာ-၂၅၌ တှရေ့သညျ။
ဗမာ့သမိုငျးဆရာတို့ကမူ ဗမာစာသညျ ပြူစာမှဆငျးသကျလာသညျဟု ယူဆကွသညျ။
ပြူစာမှ ဆငျးသကျရိုးမှနျလြှငျပြူ စာမှသညျ ဗမာစာဖွဈလာ စရေနျ ခတျေအဆကျဆကျ ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲပွောငျးလဲလာခဲ့သော ကွားခံစာပမြေိုး ရှိရမညျ။
ယငျးကဲ့သို့မရှိခဲ့ကွောငျးကို ရာဇကုမာရျ ကြောကျစာကသကျသေ ခံလြှကျရှိသညျ။ ရာဇကုမာရျကြောကျစာ၌ ပါဠိ၊ ဗမာ၊ ပြူ၊ မှနျ ဟူ၍ စာပလေေးမြိုးဖွငျ့ တပွိုငျတညျး ရေးထိုးထားသညျကို တှရှေိ့နိုငျပါသညျ။
ယငျးကြောကျစာမှာအကွောငျးအရာ တဈခုတညျးကို စာပလေေးမြိုးဖွငျ့ တဈခတျေတညျးတှငျ ရေးထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ဗမာစာသညျ ပြူ စာမှ ဆငျးသကျလာသညျဟူသော အဆိုမှာ ခိုငျလုံသောအထောကျ အထားမဟုတျခြေ။
အလားတူစှာ မှနျစာမှဆငျးသကျလာ သညျဟု ဆိုပွနျရနျလညျး ယငျးကြောကျစာမှာပငျ မှနျစာလညျး ပါရှိနပွေီးဖွဈသောကွောငျးတညျး။
ယနထေိ့ ပြူကြောကျစာ ကိုကောငျးစှာ ရရေလေညျလညျဖတျတတျသူ ဟူ၍မရှိသေးခြေ။
ဒေါကျတာသနျးထှနျးက သူ၏ခတျေဟောငျး မွနျမာ့ရာဇဝငျ စာ-၁၂၂ တှငျ ထိုလေးရာစုတှငျ စာရေးနညျးပညာကို ပြူတို့ ရကွလြှကျ မှနျနှငျ့ ရခိုငျတို့က ၆ ရာစုတှငျရနပွေီးဖွဈလြှကျ နောငျအခါ
ဗမာတို့က ပြူ၊ မှနျ နှဈဦးစလုံး ထံမှ နညျးကို မှီလြှကျ ၁၁ ရာစုတှငျ ထိုပညာကို ရကွသညျဟု မှတျယူနိုငျ သညျဟူ၍ ကောကျခကျြခြ ရေးသားခဲ့ပါသညျ။
တဖနျပုဂံခတျေ၊ပငျးယခတျေ၊အငျးဝခတျေ ကြောကျစာမြားကို သသေခြောခြာ လလေ့ာကွညျ့ပါကရခိုငျသံဖွငျ့ရေးသားထား သောရခိုငျ စာပအေသုံးအနူနျးမြားကိုသာ တှရှေိ့ကွရပွနျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဗမာတို့သညျ ဗမာစာကို ပြူနှငျ့ မှနျတို့ထံမှ ရသညျဟူသောအဆိုကို စဉျးစားစရာ ဖွဈလာသညျ . ။
ရခိုငျ့အသံ နှငျ့ ပုဂံခတျေဗမာကြောကျစာ ကို နှိငျးယှဉျခွငျး
ဗမာစာပေ တိုးတကျလာသော ပထမအငျးဝခတျေ ကာလ မှာလညျး မွနျမာပွညျအလယျပိုငျး ကို ရှမျးတို့ကွီးစိုးထားခြိနျဖွဈသဖွငျ့ ဗမာစာ တိုးတကျလာ ခွငျးသညျ ရှမျးတို့ရဲ့ ကြေးဇူး လညျး ပါဝငျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဗမာစာ သညျ ဗမာလူမြိူးတို့ရဲ့ စာပေ ဟု ဆိုခွငျးထကျ မွနျမာပွညျထောငျစုသားအားလုံးတို့ရဲ့အမြားပိုငျ ဘုံ စာပေ အရေး အသား ဟု ဆိုရပမေညျ။
← ဘယ်လိုလှေကားထစ်မျိုးတွေက အိမ်ခိုက်တတ်စေလဲ
ဘွန်းစိုင်းအပင် စိုက်မယ်ဆိုရင် မြေစပ်နည်း လေ့လာကြည့်ရအောင် →